Osonkontileka Bophahla Bensimbi eBoston Massachusetts
Real Estate Listings: » Business Directory » Construction Companies » US » Massachusetts » Boston » Osonkontileka Bophahla Bensimbi eBoston Massachusetts1
Ukuvuselelwa kokugcina 2020-12-28
Kuguquliwe 4 months ago
Ikhodi Yokuposa: 02111
IG & O Construction & Roofing ingesinye sezinkontileka ezinophahla lwensimbi ezinolwazi kakhulu eBoston, eMassachusetts ezihlinzeka ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme kakhulu yokufulela izinsimbi ehambisana nezinsizakalo zokufakwa kophahla lwensimbi olusezingeni eliphezulu emakhaya nasezakhiweni zezentengiselwano eBoston Metropolitan Area. Sekuyiminyaka engaphezu kwengu-25, iG & O Construction ibihamba phambili embonini yokufulela izinsimbi esebenza ngokukhethekile ukufakwa kophahla lwethusi, ukufulela i-aluminium, amasistimu okufulela umthungo, ukufulela ngothayela, uthayela wensimbi / ukufulela izinsimbi, ukufakwa kwensimbi okwenziwe ngesikela kanye nezinsizakalo zokufulela ngothayela. Shayela i-G & O Construction & Roofing ngokubonisana kwamahhala manje (800) 778-4640 http://www.gandogo.com
(800) 778-xxxx Khombisa
Xhumana nomkhangisi (800) 778-xxxx
IBoston (UK:, US:) yidolobha elikhulu nedolobha elinabantu abaningi kakhulu leCommonwealth yaseMassachusetts e-United States, nedolobha elinabantu abaningi kakhulu e-United States. Idolobha elifanele lifinyelela kumakhilomitha-skwele angama-49 (isibalo samakhilomitha angama-127) nesibalo sabantu ababalelwa ku-694,583 ngonyaka we-2018, futhi liwenza idolobha elinabantu abaningi kakhulu eNew England. IBoston yisihlalo seSuffolk County futhi, yize uhulumeni wesifunda wahlakazwa ngoJulayi 1, 1999. Leli dolobha liyindawo yezomnotho namasiko yendawo enkulu kakhulu yedolobha eyaziwa njengeGreater Boston, indawo yedolobha elikhulu lezibalo (MSA). abantu ababalelwa ezigidini ezingama-4,8 ngonyaka wezi-2016 futhi babalwa njengendawo yeshumi ngobukhulu ezweni. Njengendawo ehlanganisiwe yezibalo (CSA), le ndawo ebanzi iya ekhaya inabantu ababalelwa ezigidini eziyi-8,2, okwenza ibe ngesesithupha kunabo bonke abantu e-United States. IBoston ngomunye womasipala abadala kakhulu e-United States, eyasungulwa eSifundeni SaseShawmut e Ngo-1630 abahlali basePuritan ababehlala edolobheni lesiNgisi elifanayo igama. Kwakuyisimo sezenzakalo ezimbalwa ezibalulekile zeMelika Revolution, ezinjengeBoston Massacre, iBoston Tea Party, iMpi yaseBunker Hill, kanye neSiege of Boston. Lapho ithola inkululeko yase-US kusuka eBrithani, yaqhubeka nokuba yichweba elibalulekile nezindawo zokukhiqiza kanye nesikhungo semfundo namasiko. Idolobha linwebile ngaphesheya kwenhlonhlo yasekuqaleni ngokubuyiselwa komhlaba kanye nokuqokwa komasipala. Umlando wayo ocebile uheha izivakashi eziningi, kanti uFaneuil Hall kuphela odonsa izivakashi ezingaphezu kwezigidi ezingama-20 ngonyaka. Amawashi amaningi kaBoston afaka ipaki lokuqala lomphakathi lase-United States (iBoston Common, 1634), isikole sokuqala sikahulumeni noma sesifundazwe (iBoston Latin School, 1635) nohlelo lwangaphansi komhlaba olungaphansi komhlaba (iTremont Street Subway, 1897) .Namhlanje, iBoston iyisikhungo esikhulayo se- ucwaningo lwesayensi. Amakolishi amaningi asendaweni yaseBoston nawo amanyuvesi awenza umholi emhlabeni jikelele emfundweni ephakeme, kufaka phakathi umthetho, umuthi, ubunjiniyela, kanye nebhizinisi, futhi leli dolobha lithathwa njengephayona lomhlaba jikelele emisha kanye nasezamabhizinisi, kanye nokuqalwa okungaba ngu-5,000. Isizinda sezomnotho saseBoston sibuye sifake nezezimali, imisebenzi yezobuchwepheshe neyebhizinisi, i-biotechnology, ubuchwepheshe bolwazi, kanye nemisebenzi kahulumeni. Imizi edolobheni idinga isilinganiso esiphakeme kunazo zonke sokwenza izipho e-United States; amabhizinisi kanye nezikhungo kubalwa phakathi kwababephezulu ezweni ukuze kusimame imvelo futhi kutshale imali. Idolobha lingenye yezindleko eziphakeme kakhulu zokuphila e-United States njengoba liqhubeke lakhiwa, yize lihlala liphezulu ezikhundleni zokuphakama komhlaba.